Posted by: chhepyastra weekly | मे 15, 2011
संविधानसभा विरुद्ध गरिने षडयन्त्रलाई सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन
खड्गबहादुर विश्वकर्मा, मन्त्री- पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
० सरकारले सबै दलको सहमति बिना संविधानसभाको एक वर्ष म्याद थप्न संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको छ, यसले पूर्णता पाउँछ त ?
हामीमाझ संविधान जारी हुनुपर्ने दिन जेठ १४ आउन अब ठीक १४ दिन मात्र बाकी छ । तर संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन, यद्यपि यस बीच संविधान निर्माणमा केही प्रगति भने भएको छ । योसाग सागै शान्ति प्रक्रियाले पनि पूर्णता पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद सकिने भएपछि अब के गर्ने भन्ने प्रश्न नेपाली राजनीतिमा जोडतोडले उठेको छ । सरकारले यस्तो अन्योलको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण अबको एक वर्ष संविधानसभाको म्याद थपेर ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण मुद्दा सेना समायोजनमार्फत् राष्ट्रिय सेना निर्माणमा लागि शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य सहित अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधान निर्माणको क्रममा भएका प्रगतिहरूलाई दस्तावेजीकरण गरेर त्यसलाई आम जनताको बीचमा लैजाने र जनताका सुझाव संकलन गरेर छिटै पूणर्कारको संविधान निर्माण र्ने जिम्मेवारीका साथ सरकारले संविधानसभाको एक वर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको हो । त्यो प्रस्ताव संविधानसभाको सचिवालयमा दर्ता भएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अठ्ठाइस दलमध्ये काग्रेस र केही मधेसवादी दलसहित केही चार-पाचवटा दल बाहेक अरू सबैले संविधानसभाको म्याद थप्न सहमति जनाएका छन् । बहुसंख्यक दलहरूको सहमतिमा नै सरकारले सदनमा संविधानसभाको म्याद थपको लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । सरकार प्रस्तावविहीन योजनाविहीन, गतिविहीन भएर रहन सक्दैन । त्यसकारण सरकारले संविधान निर्माणको लागि एक वर्षको म्याद थप्न जरुरी रहेको भन्दै हामीले सदनमा प्रस्ताव पेश गरेको हौ । त्यो प्रस्ताव माथि छलफल गरौ । विशेषगरी काग्रेस र मधेसवादी दललाई बोलाएर त्यस प्रस्तावमा छलफल गरौा भनेर हामी लागि रहेका छौ । तर उनीहरूले अहिलेसम्म भएका प्रगतिहरूको रक्षा गर्ने, बाकी काम पुरा गर्ने अर्को उपयुक्त विकल्प ल्याउनु भयो, भने हामी छलफल गर्न तयार छौा । तर छलफलबाट भागेर सिद्धिन लागेको संविधानसभाको म्याद थप्न कुनै विकल्प प्रस्तुत नगरेर अनिर्णयको बन्दीमा मुलुकलाई राख्ने, षडयन्त्रको तानावाना बुनिएका छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । यसरी समस्याको समाधान हुादैन । संविधानसभा विरुद्ध गरिने षडयन्त्रलाई सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । त्यसकारण खुल्लारूपमा छलफल गरौ भनेर नै सरकारले एक वर्षको म्याद थप्ने प्रस्ताव विधि प्रक्रियामा नै रहेर प्रस्तुत गरेको हो ।
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभए संविधानसभाको म्याद थप्न सकिादैन भनेर सरकार परिवर्तनको कुरा पनि उठिरहेकेा छ नि ?
माओवादीको समर्थनमा अन्य साना पार्टीको सहयोग सहित झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको छ । यो सरकार राष्ट्रिय सरकार हो । सात महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षडयन्त्रको कारण जनताले सरकार नपाउने स्थिति जसरी लामो समयसम्म व्योहोर्नु पर्यो । त्यसमाथि विजय हासिल गरेर निर्माण भएको सरकार हो यो । त्यसकारण खनाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार नै राष्ट्रिय सरकार हो । संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सेना निर्माणको लागि शान्ति प्रक्रियालाई परिवर्तन सहित निश्कर्षमा पुर्याउन नेपाली काग्रेस तयार छ भने उ यो सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ । नेपाली काग्रेस यदि यो सरकारमा सहभागी हुादैन, र यो सरकारलाई विघटन गर्ने षडयन्त्र गर्छ भने नेपाली काग्रेसको शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना विरोधी चरित्रलाई अब त पशुपतिनाथले समेत ढाकछोप गर्न सक्दैनन् ।
० तपाईंहरूकै पार्टीबाट सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूले अझै सपथ ग्रहण गरेका छैनन्, यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
जुन उद्देश्यले यो सरकार बनेको छ, त्यो विषयमा पार्टीभित्र कतै पनि नीतिगत दृष्टिले, वैचारिक दृष्टिले विभेद छैन । हामीले यो सरकारलाई नै राष्ट्रिय सरकार भनेका छौ । यो सरकारको विकल्प हामीसाग छैन । यो सरकारको विकल्प कसैले खोज्छ भने त्यो नेपाली जनताको भावना र चाहना विपरित र देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको डिजाइनमा गएको दलाल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नृुपर्छ । सरकारमा हाम्रा साथीहरू सहभागी नभएको भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो । यो विषय सरकारसाग सम्बन्धित कुरा होइन । सरकारमा कस्ता मान्छे पठाउने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीको विचार नीति, नेपाली जनताको भावना आकांक्षा अनुसारका प्रतिनिधि सरकारमा पठाउनु पर्छर् भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । त्यस सन्दर्भमा अध्यक्षले केही त्रुटी गर्नुभएको छ । यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक विषय हो । यही विषयलाई केहीले सरकारसाग अन्तर विरोध भयो भनेर अपव्याख्या गर्न खोजी रहेका छन्, त्यो सरासर गलत छ, त्यो प्रायोजित भनाइ हो ।
० पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएको पाच महिना भइसक्यो तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस योजना आउन सकेको देखिादैन, पर्यटन मन्त्रीको हैसियतले के भन्नु हुन्छ ?
पहिला ठोस योजना बिना नै पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएको थियो । अहिले हामीले ठोस योजना ल्याएका छौ । हामी अहिले त्यही योजना अनुसार आˆना कामकारवाही अगाडि बढाइरहेका छौ । १० देखि १५ वर्षको एउटा योजना हामीले विकास गरेका छौ । हामीले बनाएको योजनामा अगाडि बढ्ने हो भने १० देखि १५ वर्षको विचमा नेपाललाई विश्वको नमुना पर्यटकीय देश बनाउन सकिन्छ । अहिले राष्ट्रिय योजनाको अभाव देखिएको छ । त्यसकारण अहिले हामी राष्ट्रिय योजना बनाउने तर्फ, लागि परेका छौ । हामीले त्यो योजना निर्माण गरिसकेका छौ । काठमाडौ, पोखरा र चितवनमा अहिलेसम्म भएका पर्यटकीय विकासलाई अझ सुदृढ गर्दै देशै भरिका सम्भावनाहरू जुन राज्यको दृष्टिबाट टाढा रहेका छन्, तिनलाई राष्ट्रिय योजनामा समाहित गराएका छौ । त्यसको लागि खप्तड एउटा केन्द्र, सेतिमहाकाली र पहाडी भू-भागलाई समेत समटेका छौ । सुर्खेत देखि हुम्ला, मुगु, डोप्लालाई समेटेर रारा केन्द्र, दाङ देखि कैलाली कञ्चनपुरसम्म, चिसापानीलाई केन्द्र बनाएर एउटा राष्ट्रिय केन्द्र, जलजला ढोरपाटनलाई एउटा राष्ट्रिय केन्द्र, पूर्वमा अरूण उपत्यकालाई एउटा केन्द्र, मिक्लाजुङलाई एउटा केन्द्र, जनकपुर, लुम्बिनीलाई समेटेर एउटा केन्द्र बनाएर यी सबैलाई हामीले राष्ट्रिय योजनामा जोडेका छौ । यही क्रममा हामीले त्यस क्षेत्रको विकास तथा निर्माण गर्दै जाने छौ । त्यस क्षेत्रहरूमा राज्य, पर्यटन व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत हामीले सहयोग गर्न भनेका छौ । हाम्रो यो योजनालाई सफल पार्न हामीले यहाको हवाइ क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई राम्रो सहयोगी बनाएर नेपाल वायुसेवा निगममा अहिले रहेको अवस्थाको अन्त्य गरेर त्यसको गुणात्मक रूपले विकास गर्नेमा हामी केन्दि्रत भएका छौ । केही समय भित्र मै निगमको लागि आवश्यक जहाजहरू खरिद गरेर यसलाई सुदृढ गर्ने योजनामा अगाडि बढिरहेका छौ ।
० तपाईंले जहाज खरिद गर्ने त भन्नु भयो तर नेपालवायु सेवा निगम लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ, यसको सुधारको लागि के सोच्नु भएको छ ?
नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारको लागि त्यसको व्यवस्थापकिय पक्ष, नीति र योजनाको पक्ष, जनशक्तिको पक्ष र संरचनाको पक्ष सुधारको लागि हामीले नया ढंगले सोचिरहेका छौ । हामी त्यसलाई नया ढंगले सुदृढ गछौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा पनि हाम्रो ध्यान नया ढंगले केन्दि्रत हुन जरुरी छ । देशैभरिका विमानस्थलहरूमा नया ढंगले ध्यान केन्दि्रत गर्न आवश्यक छ । हामीले अहिले कतिपय ठाउमा तत्काल निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाइसकेका छौ ।
० नागरिक उड्यन प्राधिकरणले नया जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर अर्थ मन्त्रालयले बाधा पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि, वास्तविकता के हो बताइदिनुस न् ?
हामी अहिले के निर्णयमा पुगेका छौ भने सरकारको लागि एउटा सानो जाहाज चाहिन्छ । सरकारको कामको लागि सरकारका मुख्य मान्छेहरूलाई आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेलामा प्रयोग गर्न सक्ने सानो जहाज खरिद गर्नुपर्छ । त्यस विषयमा हामी छलफल गछौ । त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन हामी लागिरहेका छौ ।
पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिमा जटिलता थपिएको छ । अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न नेपाली जनताका अगाडि छन् । हामी सरकारमा गइसकेपछि सरकारले के काम गरिरहेकेा छ भन्ने जिज्ञासा आम जनतामा छ । मैले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको हुनाले यहाको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, मन्त्रीले के सोचिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा पनि जनतामा छ । त्यसलाई स्पष्ट पार्दै हाम्रा विचार, योजनाहरू आम जनताका माझ लैजाने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यस क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।